WAR CUSUB: Axmed Madoobe oo Shuruud Yaab leh ku xiray inuu Saxiixo Liiska Xubnaha Labada Aqal (Aqri) - iftineducation.com
aadan21 / December 3, 2016
iftineducation.com – Wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ee xarunta KMG ee maamulka Jubbland ayaa sheegaya in Madaxweynaha maamulkaasi Sheekh Axmed Islaam (Axmed Madoobe) uu diiday in uu saxiixo Liiska Xildhibaanada Aqalka Sare iyo Aqalka Hoose ee lagu soo doortay Kismaayo.
Guddiga Doorashooyinka dadban ee Heer Federaal ayaa la sheegay in Madaxweynaha Jubbaland u gudbiyeen Liiska Magacydaa Labada Aqal ee lagu soo doortay magaalada Kismaayo si uu u saxiixo, hasa ahaataee Axmed Madoobe ayaa diiday in uu saxiixo liiskaasi.
Sheekh Axmed Madoobe ayaa Shuruud kaga dhigay in uu saxiixo Liiska Xildhibaanada labada Aqal ee Kismaayo lagu doortay in marka hore la xaliyo cabashada kasoo yeereysa maamulka Puntland ee ku aadan wax ka badal la sheegay in lagu sameeyay xubnaha Aqalka sare ee gobolada Waqooyi.
Maamulka Puntland ayaa cabasho ka keenay sida ay ku doodayaan wax kabadal lagu sameeyay Heshiiskii Madasha Wadatashig Qaran ee lagu qeyb saday xubnaha Aqalka sare, waxa ayna kasoo horjeedaan Xubno la sheegay in loo kordhiyay gobolada Waqooyi iyo xubnaha matalaya gobolka Nugaal in lagu doorto Muqdisho.
Guddiga Doorashooyinka dadban iyo Maamulka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa dhawaan shaaciyay in Baarlamaanka cusub ay kulankooda ugu horeeyo yeelan doonaan 6-da bishan, waxaana Xildhibaanada la doortay loogu baaqay in ay soo xaadiraan magaalada Muqdisho.
Maamulka Puntland ayaa joojiyay doorashada xubnaha Aqalka hoose ee lagu dooranayay magaalada Garawe, waxa ayna Puntland shuruud uga dhigtay in doorashada sii socoto in marka hore la xaliyo tabashooyinkooda.
Maamulka Jubbaland oo xulufo wadaag hoose yihiin Maamulka Puntlnad ayaa u muuqda mid hada ku taageeraya Maamulka uu hogamaiyo Cabdiweli Gaas cabashada ay wadaan, waxaana suurto gal ah in magaalada Muqdisho aysan imaan Xildhibaanada labad aqal ee laga soo doortay Puntland iyo Jubbaland kahor inta ana la xalin tabashooyinka jira.
wiil walaalkee ah ayaa wuxuu ii sheegay inuu bahalkiisa marka….